A Intshayelelo Emfutshane gearbox - Nantong ant Machinery Co., Ltd Error 400 (Bad Request)!!1
A Intshayelelo Emfutshane gearbox
A umatshini iquka umthombo wamandla kunye nenkqubo zokuhambisa umbane, ebonelela isicelo wokuhlangana amandla. Amaxesha amaninzi transmission libhekisela nje gearbox osebenzisa amagiya kunye noololiwe elabiwe ukuba isantya torque nokutshintsha i batshintshana umthombo wamandla kwesinye isixhobo
ukudluliselwa gama libhekisela drive uloliwe yonke, kubandakanya bamba, gearbox, shaft esi (kuqhubo lingena-wheel), umehluko, upper drive wokugqibela.
Ukusetyenziswa iqhelekileyo kwiinqwelo mafutha, apho ukudluliselwa akufundisayo imveliso ye itheyibhile ephindaphindayo ukuba amavili drive. iinjini ezinjalo kufuneka ukusebenza ngesantya esiphezulu kakhulu ejikelezayo, leyo ezingalungile yokuqala, ngovimba, kunye zokuhamba benomkhuhlane. Ukudluliselwa kunciphisa injini isantya eliphezulu ukuya isantya wheel kancinci, ukwandisa torque kule nkqubo. Uthumelo nazo zisetyenziswa ngeebhayisekile emoto, imishini fixed, yaye naphi isantya ojikeleza ngaso kunye torque kufuneka lungqanyaniswe
Uthumelo nazo kusetyenziswa yezolimo, industrial, zokwakha, imigodi nezeemoto izixhobo. Ukongezelela transmission eziqhelekileyo ifakwe amagiya, izixhobo yenza ukusetyenziswa kakhulu lwe hydrostatic drive kwaye zombane-adjustable isantya drives
Edlulileyo: Yini isusa plug?